Vaovao - Ahoana no mahafeno ny fitakiana avo dia avo amin'ny fahafahan'ny fitahirizana entana ny Rafitra Famindrana Shuttle?
Ahoana no mahafeno ny fitakiana avo indrindra amin'ny fahafaha-mitahiry ny Rafitra Famindrana Shuttle Mover?
Ny rafitra logistika automatique an'nyrafitra mifindra moninadia afaka mampitombo ny toerana fitehirizana ao amin'ny faritra voafetra, ary manana ny toetra ny fampiasam-bola ambany ny vidiny sy ny avo tahan'ny fiverenana.Vao haingana, nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa momba ny tetikasa Wuliangye i Inform Storage sy Sichuan Yibin Push.Ny tetikasa dia mampiasa ny rafitra shuttle mover.Ny rafitra dia vahaolana fitehirizana mahomby izay afaka mampifanaraka amin'ny fiasan'ny shuttle maro, manatsara ny fahombiazan'ny pallet, mampiasa ny toerana fitahirizana, mitahiry vola bebe kokoa ary manana vidiny lafo.
Sichuan Yibin Push Group Co., Ltd. (antsoina hoe "Push Group") dia sampana iray manontolo an'ny Wuliangye Group, miorina ao amin'ny Wuliangye Industrial Park, Yibin City, Faritanin'i Sichuan.Miaraka amin'ny fanohanan'ny tanjaka feno sy ny lanjan'ny marika Wuliangye Group, ny rojo indostrian'ny Push Group dia nitarina haingana, ary ny haavon'ny fanavaozana ara-teknolojia dia nihatsara hatrany.
2. Overview ny tetikasa
- 120 metatra ny halavany&38 metatra ny sakany
- 12,000 pallets
- 24 oramiditra &6-oraMivoaka
- 12,010 pallets
- 10 sets ny shuttle movers
- Two andian'ny shuttle mover mitsangana conveyors
- Fireo andian-tsarin'ny entanay
Ity tetikasa ity dia trano fanatobiana entana Wuliangye.Ny tranokalan'ny tetikasa dia momba ny120 metatra ny halavanySY38 metatra ny sakany.Ny mpanjifa dia manantena ny isan'ny entana12,000 pallets.Ny tontolon'ny fampiasana ny tetikasa dia24 oramampihiditra, 6 oraMivoaka, voalanjalanja miditra sy mivoaka midadasika, izay fanamby lehibe ho an'ny fitaovana fitahirizana mahazatra.Ampahafantaro ny injeniera nisafidy ny drafitra sarotra mba hihaona amin'ny fahazaran'ny mpanjifa amin'ny fampihenana ny vidiny, ary nahavita soa aman-tsara ny fanatanterahana ny drafitra.
Ny Inform Storage dia mampitaha vahaolana amin'ny fitaovana isan-karazany, ary farany mamolavola ny isan'ny entana12,010 palletsmba hamenoana ny fitakiana fitahirizana avo dia avo ny mpanjifa.10 sets nyshuttle aryfiara fitaterana, roa set nympanamory fiaramanidinaconveyors mitsangana, aryandian-tsambo efatradia ampiasaina mba hahafeno ny fepetra takian'ny fahombiazan'ny fampandehanana ny mpampiasa amin'ny fidirana mandritra ny andro sy ny fandefasana mandritra ny vanim-potoana.
Sary of ny process inbound:
Sarin'ny fizotry ny fivoahana:
Ny rafi-pitaterana shuttle dia rafitra fanatobiana karazana automatique mandeha ho azy ahitana nympanamory fiaramanidina, fanaterana pallet roa (fampielezam-peomivezivezy), tsaina anao koa anefarafitra fitahirizana, pallets, shuttle mover mitsangana conveyor, rafitra fampitana pallet, Ny rafitra WCS, ary ny rafitra WMS.
Fampifangaroana tonga lafatra amin'ny rafitra fitahirizana mafimafy sy automatique;
Fitehirizana automatique amin'ny pallet batch;
Izy io dia afaka manavao amin'ny fomba ara-dalàna ny fanamoriana shuttle amin'ny fidirana forklift semi-automatique, ary mifandray amin'ny rafitra famokarana sy lozisialy mba hahazoana fifandraisana tsy misy dikany;
Fepetra ambany ho an'ny lamina ara-drafitra trano fanatobiana entana, haavon'ny gorodona ao amin'ny trano fanatobiana entana, fitondra gorodona, sns.;
Ny fitehirizana fitehirizana moramora, ny gorodona maro sy ny firafitry ny faritra, mba hahazoana fitahirizana mandeha ho azy tanteraka;
Toetran'ny shuttle sy shuttle mover:
24-ora mandeha ho azy batch fandidiana
Ny radio shuttle dia azo andoavam-bola amin'ny Internet mandritra ny fandidiana
Ny famolavolana kodiaran-valo dia afaka manamaivana ny faharatrana
Load: Ny enta-mavesatra mahazatra nyNy rafitra manontolo dia 1500KG
Haingam-pandeha:tsy misy entana 120m/min;entana feno 90m/min
Fomba famatsiana herinaratra:
① Lithium vy phosphate bateria dia afaka miasa6 ny 8h.
② tsipika trolley famatsiana herinaratra.
4. Tombontsoa amin'ny tetikasa
1).Fandefasana mora sy mora
Ny teknolojia tsy manam-paharoa, ny shuttle mover dia afaka mahatsapa ny fiasan'ny fanovana sosona.
Izy io dia azo ampifanarahana amin'ny asa fitaterana marobe mba hanatsarana ny fahombiazan'ny fihodinan'ny pallet.
Fampiasana ara-drariny ny toerana fitehirizana, mitahiry vola bebe kokoa, miaraka amin'ny fahombiazan'ny vidiny.
4).Fiarovana avo, tsy dia manimba nytsaina anao koa anefaary entana
Raha ampitahaina amin'ny fametahana pallet nentim-paharazana, dia tsy ilaina ny forklifts mba hivezivezy any amin'ny lalan'ny racking, mampihena ny lozam-pifamoivoizana.
ary tsy ho simba ny racking.
Finday: +86 13851666948
Adiresy: No. 470, Yinhua Street, Jiangning District, Nanjing Ctiy, Sina 211102
Fotoana fandefasana: Apr-29-2022
Shuttle amin'ny lalana efatra, Carton Live, Conveyor, Baby Shuttle, Drive amin'ny Racking, Asrs Storage,